Zimbabwe's Grace Mugabe regains prominence for husband - HoustonChronicle.com
By ANDREW MELDRUM, Associated Press Sep. 13, 2019 Updated: Sep. 14, 2019 12 a.m.
1of6FILE- In this Thursday, Sept. 12, 2019, file photo, widow Grace Mugabe wears a black veil as she follows the casket of former president Robert Mugabe to an air force helicopter for transport to a stadium where it will lie in state, at his official residence in the capital Harare, Zimbabwe. Known as a strong-willed woman with political ambitions, Grace Mugabe rose from being one of the president’s secretaries to become first lady.Photo: Ben Curtis, AP
2of6FILE - In this June, 2, 2017, file photo, Zimbabwe's President Robert Mugabe, left, and his wife Grace attend a youth rally in Marondera, Zimbabwe. Known as a strong-willed woman with political ambitions, Grace Mugabe rose from being one of the president’s secretaries to become first lady.Photo: Tsvangirayi Mukwazhi, AP
3of6FILE - In this July, 29, 2017, file photo, Zimbabwean President Robert Mugabe's wife Grace greets party supporters at a rally in Chinhoyi, about 120 Kilometres west of the capital Harare. Known as a strong-willed woman with political ambitions, Grace Mugabe rose from being one of the president’s secretaries to become first lady.Photo: Tsvangirayi Mukwazhi, AP
4of6FILe - In this Aug. 17, 1996, file photo, Grace Marufu, right new bride of Zimbabwean President Robert Mugabe, waves at guests after their wedding ceremony at the Kutama catholic mission 80 Km (42 miles) west of Harare, where the Zimbabwean president was educated. Known as a strong-willed woman with political ambitions, Grace Mugabe rose from being one of the president’s secretaries to become first lady.Photo: JOAO SILVA, AP
5of6FILE - In this Dec. 16, 2016, file photo, Zimbabwean first lady Grace Mugabe attends a ruling ZANU PF Party Conference in Masvingo, Zimbabwe. Known as a strong-willed woman with political ambitions, Grace Mugabe rose from being one of the president’s secretaries to become first lady.Photo: Tsvangirayi Mukwazhi, AP
6of6FILE - In this Wednesday, Sept, 11, 2019, file photo, Robert Mugabe's widow Grace Mugabe, center, is escorted after a ceremony at the RG Mugabe Airport, upon the return of his remains in Harare, Zimbabwe. Known as a strong-willed woman with political ambitions, Grace Mugabe rose from being one of the president’s secretaries to become first lady.Photo: Tsvangirayi Mukwazhi, AP